राजपामा विवादः समानुपातिकलाई मन्त्री बनाउने कि नबनाउने ? - The First Nepali Digital Newspaper from Australia (Ausnepal news)
राजपामा विवादः समानुपातिकलाई मन्त्री बनाउने कि नबनाउने ?
प्रकाशित मिति: २ फाल्गुन २०७४, बुधबार
काठमाडौँ । राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) भित्र समानुपातिक सांसदलाई मन्त्री बनाउने कि नबनाउने भन्ने विवाद चर्केको छ । प्रदेश २ मा मधेसी जनअधिकार फोरम र राजपाले सरकार बनाउने गृहकार्य अघि बढाएसँगै यो विवाद सतहमा आएको हो ।
राजपाका महासचिव केशव झाले यही विवादका कारण बिहिबार मुख्यमन्त्रीको शपथसँगै गठन हुने सरकारमा आफ्नो पार्टी सहभागी नहुने जानकारी दिए । फोरम र राजपाबीच माघ २६ गते मुख्यमन्त्रीसहित चार मन्त्रालय फोरम र सभामुखसहित तीन मन्त्रालय राजपाले लिने सहमति भएको थियो ।
राजपा अध्यक्ष मण्डलका संयोजक महन्थ ठाकुर र अध्यक्ष मण्डलका सदस्य महेन्द्र यादवले पार्टीभित्र मन्त्री बन्ने आकांक्षी धेरै भएकाले समानुपातिक सांसदलाई तत्काल मन्त्री बनाउन नहुने प्रस्ताव पार्टीमा राखेका छन् ।
तर, अध्यक्ष मण्डलका सदस्यमध्ये राजकिशोर यादव र अनिल झाले त्यस प्रस्तावप्रति आपत्ति जनाएका छन् । उनीहरूले समानुपातिक र प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदको हैसियत बराबर भएको भन्दै त्यस्तो प्रस्ताव आफूहरूले नमान्ने बताए ।
राजपाभित्र २५ सांसदमा १० जना समानुपातिकबाट निर्वाचित छन् । अधिकांश सांसद मन्त्रीका आकांक्षी छन् । राजपाले तीन मन्त्री र तीन राज्यमन्त्री पाउने तय भएको छ । अध्यक्ष मण्डलका सदस्य झाकी श्रीमती डिम्पल झासमेत मन्त्रीको आकांक्षी छिन् ।
उनी समानुपातिक सांसद हुन् । झा आफ्नी पत्नीलाई मन्त्री बनाउने उद्देश्य राखेरै समानुपातिकलाई मन्त्री बनाउन नहुने प्रस्तावको विरोधमा उत्रिएको स्रोतले बतायो । फागुन ३ गते मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले शपथ लिने कार्यक्रम छ ।
उनको शपथसँगै मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्ने योजना भए पनि राजपाले तत्काल मन्त्रिपरिषद्मा कसैलाई पनि नपठाउने महासचिव झाले बताए । कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।
प्रधानमन्त्रीको प्रश्न: ‘एक जना अनसन बस्दा देशै ठप्प हुने त ?
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अनसनरत डा. गोविन्द केसीमा मागहरुप्रति सरकार अहिले पनि प्रतिवद्ध […]
प्रधानमन्त्री ओलीका मतदाता भन्छन्, न्याय नपाए काठमाडौँमै अनशन बस्छौं
काठमाडौं । सुरक्षाको माग गर्दै काठमाडौँ आइपुगेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका मतदाताले आफ्नो मागउपर […]
पानीजहाज कार्यालय खोल्ने सरकारको निर्णय, उपसचिवले नेतृत्व गर्ने
काठमाडौं । सरकारले पानी जहाज चलाउनका लागि कार्यालय स्थापना गर्ने भएको छ । मन्त्रिपरिषदले गरेका निर्णयहरू […]
महिनामा बजेट खर्च गर्नेमा प्रधानमन्त्री कार्यालय सबैभन्दा बढी, कुन निकायले कति खर्च गरे ? (तालिका)
काठमाडौं । साउनदेखि शुरु भएर असारमा सकिने आर्थिक वर्षको पहिलो छ महिनालाई सामन्यतया राजस्व संकलनका लागि उर्वर […]
पहिचान मागेर या बिन्ती चढाएर पाइँदैन : प्रचण्ड
धादिङ । पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले कुनै पनि जातीय […]
सांस्कृतिक विविधताले हाम्रो एकतालाई अझ मजबुत : प्रधानमन्त्री ओली
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सांस्कृतिक विविधताले हाम्रो एकतालाई अझ मजबुत बनाएको बताउनुभएको छ […]
आयोजक थाइल्याण्डसँग पराजित हुँदै नेपाल उपविजेतामै सीमित
डा. गोविन्द केसीको समर्थनमा प्रदर्शन, कांग्रेस र विवेकशीलका कार्यकर्ता मात्रै सहभागी
डा. केसीको स्वास्थ्य कमजोर भएको छ, तर गम्भीर छैन : त्रिवि शिक्षण अस्पताल
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य बढ्यो, तर निगमले तत्काल मूल्य वृद्धि नगर्ने